ASAN’NY APOSTOLY 20. 1 - 16 F .2, 6 | Fitandremana Ankadifotsy
ASAN’NY APOSTOLY 20. 1 - 16 F .2, 6
MANANATRA NY MPIANATRA
Faritra maro: Efesosy, Makedonia manontolo, Grisia no toerana voatanisa eto ho notetezin’i Paoly ary nitondrany fananarana tamin’ny alalan’ny teny maro hoan’ny mpianatra isak’ireo tanàna ireo. Tsy mitsahatra mitety tany i Paoly ao anatin’ny dia misionera izay ataony. Tena zava-dehibe taminy ny nampahery ny olona efa nandray ny Filazantsara tamin’ireny faritra notsidihany ireny. Fomba fiasa tena modely tsara alain-tahaka izany.
Mpiara-manompo: Niaraka taminy izy fito lahy voatanisa eto izay mpiara-manompo aminy. Inoana fa nampahery an’i Paoly na dia ny fahitana sy ny fiarahana tamin’izy ireo fotsiny aza. Zava-dehibe mitondra ho amin’ny fahombiazan’ny asa ny firaisan-tsaina sy firahalahiana tahaka izao.
Mitoriteny hatramin’ny mamatonalina: Izany no nataon’i Paoly manararaotra ny fotoana fa nanehoan’Andriamanitra ny heriny ihany koa tamin’ilay zazalahy atao hoe Eotyka izay latsaka avy eny am-baravaran-kely amin’ny rihana fahatelo, kanefa tsy maty rehefa niankohofan’i Paoly (10). Sady maneho ny herin’Andriamanitra izany no mampibaribary ny fahefan’ny mpanompony izay tena mino Azy tahaka an’i Paoly.
Faritra hafa koa: Aso, Mitylena, Kio, Samo, Mileto, tanàna nolalovan’i Paoly sy ireo mpiara-manompo aminy. Inoana fa nitondrany ny Filazantsara ny tanàna rehetra nolalovany.
Fahamarinana: Nahoana ny Apostoly Paoly no nahavita nandehandeha betsaka tahaka izany? Antony roa lehibe:1- Satria izy mihitsy no efa nivoady fa “tsy maintsy manatanteraka ny iraka nampanaovin’ny Tompo azy ka hanaovany ny ainy tsy ho zavatra”(Asa 20.24). 2- Izany koa no manamarina ilay voalaza hoe: “Andriamanitra ihany no mahalavorary ny dian’ny olona” (Sal.37.23-Ohab.16.9) satria Izy no tompon’ny asa dia manampy ny mpanompony hahalavorary ny iraka ampanaovina azy. Tsy mahatsapa izany ve ianao rehefa tena miasa ho Azy Tompo?